အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဖြစ်သူ H.E. Mr.Steve Marshall ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဖြစ်သူ H.E. Mr.Steve Marshall ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ၊ဇွန် ၂၆ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr.Steve Marshall ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန ၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများမှလည်း အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း အမျိုးသားအဆင့်အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှု ယန္တရားထူထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍နယူးဇီလန် နိုင်ငံတွင်ဆောင်ရွက်နေသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုစေလွှတ်ပေးသည့်အတွက် များစွာကျေးဇူး တင်မိပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရား (National Complaints Mechanism –NCM) အပါအဝင် အခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် လည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(ILO) နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားချက်များကို ဖြေရှင်းရန် အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှု ယန္တရား (National Complaints Mechanism –NCM) ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက် အကူပြုရေးအတွက် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေရန်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ များပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးနှင့်တိုင်ကြားမှုယန္တရားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန များမှအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများပါဝင်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပရေးအတွက် စီစဉ်ထား ပါကြောင်းအဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Complaints Mechanism နှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Complaints Model နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသော်လည်း မြန်မာနည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းပေးသွားရမည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း တိုင်ကြားမှုယန္တရားတစ်ရပ် ထူထောင်ထားရှိပြီး အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားများ၏ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြဿနာများအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်ကြားသူများမှ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ လွှတ်တော်အသီးသီးနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးများသို့ ပေးပို့တိုင်ကြားလာသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးသို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် စေပြီးတိုင်ကြားသူများထံ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများအား ပြန်လည်ပေးပို့လျက်ရှိပါကြောင်း စသည့် တိုင်ကြားမှုယန္တရားထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှစ်နိုင်ငံအတွေ့အကြုံများကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ခြင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။